ZoLondolozo Law & More
umbhali: Law & More
ENetherlands, isondlo ligalelo lezemali kwiindleko zokuphila zeqabane langaphambili kunye nabo nabaphi na abantwana emva koqhawulo-mtshato. Yimali oyifumanayo okanye ekufuneka uyihlawule ngenyanga. Ukuba awunamali yaneleyo yokuzondla, unelungelo […]
Athini amalungelo akho njengomqeshi?
Wonke umqeshi unelungelo unamalungelo amabini abalulekileyo: ilungelo lokonwaba lokuphila kunye nelungelo lokurenta ukukhuselwa. Apho sixoxe khona ngelungelo lokuqala lomqeshi ngokunxibelelene noxanduva lomnini-mhlaba, ilungelo lesibini lomqeshi weza kwibhlog eyahlukileyo malunga […]
Xa urenta indawo yokuhlala eNetherlands, unelungelo lokuqeshisa ngokuzenzekelayo. Kuyafana nakwabahlali bakho kunye nabahlali. Ngokomgaqo, ukhuseleko lwerente luquka imiba emibini: ukhuseleko lwamaxabiso erente kunye nokukhuselwa kwirente ekuphelisweni kwesivumelwano sokuhlala ngengqondo yokuba umnini-mhlaba akanako ngokulula […]
Uqhawulo mtshato kumanyathelo ali-10
Kunzima ukugqiba ukuba uqhawule umtshato. Nje ukuba uthathe isigqibo sokuba esi sisisombululo sodwa, inkqubo iyaqala. Izinto ezininzi kufuneka zilungiswe kwaye iya kuba lixesha elinzima ngokweemvakalelo. Ukukunceda usendleleni, siza kukunika […]
Ukufaka isicelo semvume yokusebenza eNetherlands. Yile nto wena njengommi wase-UK kufuneka uyazi
Kude kube ngumhla wama-31 kuDisemba 2020, yonke imithetho ye-EU yayisebenza e-United Kingdom kwaye abemi abanobuzwe base-Bhritane banokuqala ngokulula ukusebenza kwiinkampani zase-Dutch, okt, ngaphandle kwendawo yokuhlala okanye imvume yokusebenza. Nangona kunjalo, xa i-United Kingdom ishiya i-European Union ngo-Disemba 31, 2020, imeko itshintshile. […]
Isivumelwano sokurenta sinemiba eyahlukeneyo. Into ebalulekileyo yoku ngumnini-ndlu kunye noxanduva analo malunga nomqeshi. Indawo yokuqala ngokubhekisele kwizibophelelo zomnini-mhlaba “kokonwaba okunokulindelwa ngumqeshi ngokusekwe kwisivumelwano sokurenta”. Emva kwayo yonke loo nto, uxanduva […]
Kufuneka wenze ntoni xa ungafezekisi uxanduva lwakho lwesondlo?
I-Alimony sisibonelelo kulowo wayesakuba liqabane kunye nabantwana njengegalelo kulondolozo. Umntu ekufuneka ehlawule imali yesondlo ukwabizwa ngokuba ngumntu onetyala lesondlo. Umamkeli wesondlo uqhele ukubizwa ngokuba ngumntu onelungelo lesondlo. I-Alimony sisixa esi […]
Ungquzulwano lomlawuli lomdla
Abalawuli benkampani kufuneka ngalo lonke ixesha bakhokelwe ngumdla wenkampani. Kuthekani ukuba abalawuli kufuneka benze izigqibo ezibandakanya iimfuno zabo? Nguwuphi umdla okhoyo kwaye kulindeleke ukuba umlawuli enze ntoni kwimeko enjalo? Kunini ukungqubana kwe […]
Utshintsho kwirhafu yokudlulisa: ukuqala kunye nabatyalomali baqwalasele!
2021 ngunyaka apho izinto ezimbalwa ziya kutshintsha kwicandelo lomthetho kunye nemigaqo. Kukwimeko efanayo malunga nokudluliselwa kwerhafu. Nge-12 kaNovemba ka-2020, iNdlu yabaMeli ivumile umthetho oyilwayo wolungiso lwerhafu. Injongo yoku […]
Disemba 21, 2020
Ubunini lelona lungelo libalaseleyo umntu anokuba nalo ngokulungileyo, ngokweKhowudi yeNkcubeko. Okokuqala, oko kuthetha ukuba abanye mabahlonele ubunini baloo mntu. Ngenxa yeli lungelo, kuxhomekeke kumniniyo ukufumanisa ukuba kwenzeka ntoni na kwimpahla yakhe. Ye […]
Ukuhlaziywa komthetho we-NV kunye nomyinge wamadoda / wabasetyhini
Ngo-2012, umthetho we-BV (inkampani yabucala) wenziwa lula kwaye wenziwa waba bhetyebhetye. Ngokuqala kokusebenza komthetho wokwenza lula kunye nokuguquguquka komthetho we-BV, abanini zabelo banikwe ithuba lokulawula ubudlelwane babo, ukuze igumbi elininzi lenzelwe ukulungelelanisa ubume benkampani […]
Ukukhusela Iimfihlo Zorhwebo: Yintoni Ofanele Uyazi?
Umthetho weemfihlo zorhwebo (i-Wbb) ufake isicelo eNetherlands ukusukela ngo-2018. Lo Mthetho uzalisekisa isiKhokelo saseYurophu malunga nokudityaniswa kwemithetho ekukhuseleni ulwazi olungachazwanga kunye nolwazi lweshishini. Injongo yokwaziswa kwesiKhokelo saseYurophu kukuthintela ukwahlulwa komthetho kuyo yonke […]
Ukuzalelwa kwelinye ilizwe
Ukuziqhelanisa, abazali ekujoliswe kubo baya bekhetha ukuqala inkqubo yokuzalela umntwana phesheya. Banokuba nezizathu ezahlukeneyo zoku, zonke ezinxulunyaniswe nokuma okuqinisekileyo kwabazali ekujongwe kubo phantsi komthetho waseDatshi. Oku kuxoxwe ngokufutshane apha ngezantsi. Kweli nqaku sichaza ukuba amathuba aphesheya anakho […]
Ukuzalela umntu eNetherlands
Ukukhulelwa, ngelishwa, ayisiyonto ilungileyo kuwo wonke umzali onomnqweno wokuba nabantwana. Ukongeza kwimeko yokwamkelwa komntwana ngumntu ongamzelanga ibengowakhe, ukumitha umntwana wabanye abantu kunokuba yinto enokumiselwa ngumzali ekulindeleke ukuba amkelwe. Okwangoku, ukumitha umntwana wabanye abantu akulawulwa ngumthetho eNetherlands, owenza imeko yezomthetho […]
Xa umntwana ezelwe, umama womntwana ngokuzenzekelayo unegunya lobuzali emntwaneni. Ngaphandle kwamatyala apho umama ngokwakhe usengumntwana ngelo xesha. Ukuba umama utshatile neqabane lakhe okanye ubambisene naye ebhalisiweyo ngexesha lokuzalwa komntwana, […]
UMthetho oYilwayo woPhuculo loBambiswano
Kude kube namhla, iNetherlands ineendlela ezintathu zomthetho zentsebenziswano: ubuhlakani, ubuhlakani ngokubanzi (VOF) kunye nobambiswano olunomda (i-CV). Isetyenziswa ikakhulu kumashishini amancinci naphakathi (ii-SMEs), icandelo lezolimo kunye neenkonzo. Zontathu ezi ntlobo zentsebenziswano zisekwe kumgaqo wokuthandana […]
Njengomqeshi, ngaba unokwala ukuxela umqeshwa wakho egula?
Kwenzeka rhoqo ukuba abaqeshi banamathandabuzo malunga nokuxela izigulo zabo kubasebenzi. Umzekelo, kuba umqeshwa uhlala ebika ngokugula ngeMivulo okanye ngooLwezihlanu okanye ngenxa yengxabano kwezamashishini. Uvumelekile ukuba ubuze ingxelo yengxelo yokugula komqeshwa wakho kwaye unqumamise intlawulo kude kumiselwe […]
Umthetho wokuyeka inkonzo
Uqhawulo-mtshato lubandakanya okuninzi Inkqubo yokuqhawula umtshato inamanyathelo aliqela. Ngawaphi amanyathelo ekufuneka ethathiwe kuxhomekeke ekubeni unabo na abantwana nokuba sele uvumile kwangethuba ngemvumelwano neqabane lakho langaphambili. Ngokubanzi, le nkqubo ilandelayo esemgangathweni kufuneka ilandelwe. Eyokuqala ka […]
Kuyacaphukisa kakhulu ukuba imiyalelo yakho ayilandelwa ngumqeshwa wakho. Umzekelo, umqeshwa ongenakuthemba ukuba uza kuvela kwindawo yokusebenza ngeempelaveki okanye lowo ucinga ukuba ikhowudi yakho yokunxiba ecocekileyo ayisebenzi kuye. […]
Yintoni isondlo? ENetherlands isibonelelo semali ligalelo lezemali kwiindleko zokuphila kweqabane lakho langaphambili kunye nabantwana emva koqhawulo-mtshato. Yimali oyifumanayo okanye ekufuneka uyihlawule ngenyanga. Ukuba awunayo ingeniso eyoneleyo onokuphila ngayo, unokufumana isondlo. […]
Inkqubo yokubuza kwiGumbi leShishini
Ukuba iingxabano ziye zavela ngaphakathi kwenkampani yakho ezingenakusonjululwa ngaphakathi, inkqubo phambi kweCandelo leShishini inokuba yindlela efanelekileyo yokusombulula. Inkqubo enjalo ibizwa ngokuba yinkqubo yophando. Kule nkqubo, iGumbi loShishino liyacelwa ukuba liphande umgaqo-nkqubo kunye nemicimbi yenkqubo […]
Ukugxothwa ngexesha lokuvavanywa
Ngexesha lokuvavanywa, umqeshi nomqeshwa banokwazana. Umqeshwa unokubona ukuba umsebenzi kunye nenkampani bathanda na, ngelixa umqeshi angabona ukuba umqeshwa uwulungele na umsebenzi. Ngelishwa, oku kungakhokelela ekugxothweni komqeshwa. […]
Ukupheliswa kunye namaxesha esaziso
Ngaba uyafuna ukulahla isivumelwano? Oko akusoloko kunokwenzeka ngokukhawuleza. Ewe kunjalo, kubalulekile ukuba ngaba kukho isivumelwano esibhaliweyo kunye nokuba ngaba izivumelwano zenziwe malunga nexesha lesaziso. Ngamanye amaxesha ixesha lesaziso elisemthethweni lisebenza kwisivumelwano, ngelixa wena une […]
Oktobha 30, 2020
Uqhawulo mtshato kwilizwe jikelele
Kwakulisiko ukutshata umntu wesizwe esinye okanye wemvelaphi efanayo. Kule mihla, ukutshata kwabantu bezizwe ezahlukeneyo kuya kusiba yinto eqhelekileyo. Ngelishwa, i-40% yemitshato eNetherlands iphela kuqhawulo-mtshato. Isebenza njani le nto ukuba umntu uhlala kwelinye ilizwe ngaphandle kwe […]
Isicwangciso sokuba ngumzali kwimeko yoqhawulo mtshato
Ukuba unabantwana abancinci kwaye uqhawula umtshato, kufuneka kwenziwe izivumelwano malunga nabantwana. Izivumelwano macala onke ziya kubhalwa phantsi ngesivumelwano. Esi sivumelwano saziwa njengesicwangciso sokuba ngumzali. Isicwangciso sobuzali sisiseko esihle sokufumana uqhawulo mtshato olungileyo. Yi […]
Yilwa noqhawulo mtshato
Umlo wokuqhawula umtshato sisiganeko esingathandekiyo esibandakanya iimvakalelo ezininzi. Ngeli xesha kubalulekile ukuba izinto ezininzi zicwangciswe ngokufanelekileyo kwaye ke kubalulekile ukuba ubize uncedo olufanelekileyo. Ngelishwa, ihlala isenzeka xa kusenziwa amaqabane exesha elizayo […]
Oktobha 6, 2020
Yintoni irekhodi lolwaphulo-mthetho?
Ngaba uyaphule imithetho yekorona kwaye wohlwaywa? Ke kude kube kutshanje, uzibeka emngciphekweni wokuba nengxelo yolwaphulo-mthetho. Isohlwayo sekhorona siyaqhubeka nokubakho, kodwa akusekho nqaku kwirekhodi lolwaphulo-mthetho. Kutheni le nto iirekhodi zolwaphulo-mthetho zibe luluva olunje […]
Ukugxothwa lelinye lawona manyathelo afikelela kude kumthetho wengqesho oneziphumo ezibi kumqeshwa. Kungenxa yoko le nto wena njengomqeshi, ngokungafaniyo nomqeshwa, ungenakuyibiza nje ngokuyeka. Ngaba uzimisele ukugxotha umqeshwa wakho? Kwimeko apho, kuya kufuneka ukhumbule iimeko ezithile […]
Ukonakala kwebango: Yintoni ekufuneka uyazi?
Umgaqo osisiseko usebenza kumthetho wembuyekezo waseDatshi: wonke umntu uthwala owakhe umonakalo. Ngamanye amaxesha, akukho mntu unoxanduva. Cinga, umzekelo, ngomonakalo ngenxa yesichotho. Ngaba umonakalo wakho ubangelwe ngumntu? Kwimeko enjalo, kunokwenzeka kuphela ukubuyisa umonakalo ukuba […]
Iimeko kwimeko yokudibana kosapho
Xa umphambukeli efumana imvume yokuhlala, unikwa ilungelo lokudibana nosapho. Ukudityaniswa kwakhona kosapho kuthetha ukuba amalungu osapho lomntu obambe isikhundla avunyelwe ukuba eze eNetherlands. Inqaku lesi-8 lesivumelwano saseYurophu esingamalungelo oluntu libonelela ngelungelo […]
Ngaphantsi kweemeko ezithile, ukupheliswa kwesivumelwano sengqesho, okanye ukurhoxa, kuyinto enqwenelekayo. Inokuba njalo imeko ukuba omabini amaqela acinga ukurhoxa kwaye agqibe ngesivumelwano sokupheliswa koku. Unokufunda ngakumbi malunga nokupheliswa kwemvumelwano kunye nokupheliswa kwesivumelwano kwindawo yethu: Gxotha indawo. Ukwengeza, […]
Nawuphi na umsebenzi owenzayo, umgaqo osisiseko eNetherlands kukuba wonke umntu kufuneka akwazi ukusebenza ngokukhuselekileyo nangokwempilo. Umbono weli nqanaba kukuba umsebenzi akufuneki ukhokelele ekuguleni ngokwasemzimbeni nangokwengqondo kwaye hayi konke konke ekufeni ngenxa yoko. Lo mthetho […]
Intlawulo enyanzelekileyo: Ukuvuma okanye ukungavumelani?
Umntu onetyala ongasakwaziyo ukuhlawula amatyala akhe angekahlawulwa unokukhetha ezimbalwa. Unokwenza ifayile yokulahleka kwakhe okanye enze isicelo sokwamkelwa kulungelelwaniso lwamatyala ngokusemthethweni. Umboleki-mali unokufaka isicelo sokutshatyalaliswa komntu onetyala. Phambi kokuba onetyala abe […]
Isimangalo esaziwayo se2019 : Umzimba olawulayo waseMexico iCRT (uConsejo Regulador de Tequila) uqalile ityala ngokuchasene noHeineken elikhankanye igama elithi Tequila kwiibhotile zalo zeDesperados. I-Desperados yeqela elikhethiweyo le-Heineken leemveliso zamanye amazwe kwaye ngokwe-brewer, yi "tequila ibhiya enevumba". Desperados […]
Bobabini abaqeshi nabaqeshi banokudibana nokugxothwa ngeendlela ezahlukeneyo. Ngaba ukhetha ngokwakho okanye akunjalo? Kwaye phantsi kwaziphi iimeko? Enye yezona ndlela zibukhali kukugxothwa kwangoko. Ngaba kunjalo? Ke ikhontrakthi yengqesho phakathi komqeshi nomqeshi iyakuphela kwangoko. […]
Izithuba ezindala →